ma po Archives - Tameelay
ပြသနာဆိုတာ စိတ်ညစ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။အောင်မြင်ဖို့အတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပါပဲ။
ရလာဒ် အမြင့်ဆုံးကိုကြိုးစား ပျံကြည့်တယ်။မုန်တိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါတော့ အနိမ့်ဆုံးကို ချပြီးပျံသန်းရတာပေါ့။ လတ်ခုလတ်မှာ ပြုတ်ကျလို့မဖြစ်သေးပဲလေ။ မောရင်ခဏနားတယ်။ပြီးရင် ရှေ့ဆက်လှမ်းတယ်။ ပန်းတိုင်တစ်ခုဆီကိုပေါ့။ပုံမှန်လျှောက်နေဖို့ပါပဲ။ ပန်းတိုင်တစ်ခု‌ရောက်တိုင်း မရပ်တန့်လိုက်ပါနဲ့။‌ရှေ့ဆက်တိုးပါ။ရောက်နေတဲ့ ပန်းတိုင်ထက် ရှေ့ကပန်းတိုင်တွေက ပိုလို့ လှတာ။ဒါပေမဲ့ အန္တရာယ်များလာပြီနော်။သတိတော့ထားပေါ့။ မောတယ်လို့မညည်းနဲ့။ပန်းတယ်ဆိုပြီးပစ်လဲမချနဲ့။မောတဲ့အခါ မော ပန်းတဲ့အခါပန်းပေမဲ့ ရောက်ရာ အဆင့်မှာ ပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ကျေနပ်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ ရပ်တန့်လို့မဖြစ်ဘူး။ တချို့အရာတွေမှာ ရောင့်ရဲတဲ့စိတ်က ကောင်းပေမဲ့ တချို့‌အရာတွေမှာတော့ ရောင့်ရဲတတ်တဲ့စိတ် ထားလို့မရဘူး။ အောင်မြင်ချင်ရင်တော့ ပင်ပန်းပါမယ်။တနေ့နှင့်တနေ့ မရိုးတဲ့ ပြသနာတွေတွေ့ရပါမယ် ။ ပြသနာဆိုတာ စိတ်ညစ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။အောင်မြင်ဖို့အတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပါပဲ။ စိန်ခေါ်မှုတွေများလေ ကိုယ်ကစင်ပေါ်ရောက်လေပါပဲ။ မကြောက်ပါနဲ့။အားမငယ်ပါနဲ့။ရဲရဲဆက်လျှောက်ပါမယ်။ စိတ်ညစ်တဲ့အခါ ငိုလိုက်ပါ။စိတ်လှုပ်ရှားပြီး အရမ်းကြောက်နေတဲ့မခါ မျက်စိလေးမှိတ်ပြီး ခဏလေး ရပ်နေလိုက်ပါ။ နောက်ပြန့်တော့ ဘယ်တော့မှ မလှည့်လိုက်ပါနဲ့။ ပျော်ရွှင်ချင်ရင် ခရီးထွက်ပါ။အေးချမ်းချင်ရင်တော့ ဝိပသနာရှု့ရမှာ‌ပေါ့။ဒါနမျိုး‌စေ့လဲ လမ်းတလျှောက်ကျဲပက်ခဲ့ပါ။နည်းစေများစေ မတွေးပါနဲ့။ကိုယ့်တနိုင်တပိုင်သာ … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 07, ma po
ကျမအားငယ်တဲ့အချိန်မှာ…နွေးထွေးစွာခိုလုံရမဲ့ ရင်ခွင်တစ်ခုကို တမ်းတဖူးတယ်..
June 6, 2020 by daddy
အတိတ်နေ့စွဲ ကျမအားငယ်တဲ့အချိန်မှာ…နွေးထွေးစွာခိုလုံရမဲ့ ရင်ခွင်တစ်ခုကို တမ်းတဖူးတယ်.. ကျမငိုနေတဲ့အချိန်မှာ…မှီတွယ်စရာ ပခုံးတစ်ဖက် မျော်လင့်ခဲ့ဖူးတယ်… ကျမအခက်ခဲပြဿနာတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ချိန်မှာ…ရှေ့ကနေ မားမားရပ်ဖြေရှင်းပေးမဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ချင်ခဲ့တယ်… အကယ်၍သာ…ကျမတမ်းတဖူးတဲ့ ရင်ခွင်တစ်ခုသာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့ရင်ခွင်ခိုလုံရင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်နွေးထွေးဖို့မေ့နေမိမယ်ထင်ပါရဲ့… အကယ်၍သာ…ကျမမျော်လင့်ဖူးတဲ့ ပုခုံးတစ်ဘက်သာ ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် ထစ်ခနဲဆို ငိုဖို့ပဲ စဉ်းစားမိပြီး အားတင်းဖို့မေ့နေမယ်ထင်ပါရဲ့… အကယ်၍သာ…ကျမပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ လူတစ်ယောက်သာ ရှေ့ကရပ်တည်ပေးနေခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့အပေါ်အားကိုးစိတ်နဲ့ ကြိုးစားရုန်းကန်ဖို့ မေ့နေမယ်ထင်ပါရဲ့… ဘာဖြစ်ဖြစ်..လောကကြီးဟာ မျော်လင့်တိုင်း ဖြစ်မလာသလိုပေးတိုင်းလဲ ပြန်မရတတ်ပါဘူး.. ပန်းတိုင်းလဲ မမွှေးသလိုမွှေးတဲ့ပန်းတိုင်းလဲ အရောင်အသွေး မတောက်ပနိုင်ပါဘူး.. ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာ မရှိတဲ့ လောကမှာအဖြစ် အပျက်သဘာဝကို လက်ခံနိုင်ပြီး လောကဓံကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခွင့်တွေ ရလာတော့ ကျမ တမ်းတမျော်လင့်ပိုင်ဆိုင်ချင်ခဲ့တဲ့ အရာတွေ အနားမရှိနေခြင်းဟာလဲ ကိုယ့်အတွက် ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာရပါတယ်.. မပို ( ထီးလင်း ) … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 06, ma po
June 2, 2020 by daddy
ကြေကွဲခြင်း သူမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အသိကကိုယ်ရင်ကို ပိုမောစေတာ။ တသက်တာနားခိုပါမယ်လို့ တွေးထားဖူးတဲ့ ရင်ခွင်ဟာ ခုတော့ တခြားသူတယောက်အတွက် အရိပ်ဖြစ်နေလေရဲ့။ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့အခြားသူတစ်ယောက်ကို သူ့ရင်ခွင်မှာ ခိုလုံနေတာတွေ့တော့ မနာလိုဝန်တိုစိတ်ဟာ ကိုယ့်ရင်ကို အလုံးအရင်းအုံကြွလို့။ မတားမြစ်နိုင်‌တော့ပါဘူးလေ။ငေးကြည့်နေရုံပဲပေါ့။ နာကျင်မှုရဲ့ အတိန်အနက်ကို ကျန်ရက်ခဲ့သူတွေသာ သိတဲ့ခံစားချက်မျိုး။ သူ့တို့အပြုံးတွေ အသက်ဝင်တိုင်း ကိုယ်အပြုံးဟာ အသက်မဲ့လာတယ်။ ပြုံးရင်း ဝေ့လာတဲ့ မျည်ရည်စတွေဟာ မိုးပြိုမှာကို ကြိုသိနေတဲ့ လူတစ်ယောက်အဖြစ်ပါပဲ။ ကြိုးစားမေ့ပစ်ပါလို့မပြောနဲ့။ သူ့ကို ချစ်နေသေးသ၍ တဆစ်ဆစ်နာကျင်မှုဟာ ဖြေဆေးမှမရှိဘဲ။ မပို( ထီးလင်း) ေၾကကြဲျခင္း သူမရွိေတာ့ဘူးဆိုတဲ့အသိကကိုယ္ရင္ကို ပိုေမာေစတာ။ တသက္တာနားခိုပါမယ္လို႔ ေတြးထားဖူးတဲ့ ရင္ခြင္ဟာ ခုေတာ့ တျခားသူတေယာက္အတြက္ အရိပ္ျဖစ္ေနေလရဲ႕။ ကိုယ္မဟုတ္တဲ့အျခားသူတစ္ေယာက္ကို သူ႔ရင္ခြင္မွာ ခိုလုံေနတာေတြ႕ေတာ့ မနာလိုဝန္တိုစိတ္ဟာ ကိုယ့္ရင္ကို အလုံးအရင္းအုံႂကြလို႔။ မတားျမစ္ႏိုင္‌ေတာ့ပါဘူးေလ။ေငးၾကည့္ေန႐ုံပဲေပါ့။ နာက်င္မႈရဲ႕ အတိန္အနက္ကို … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 02, ma po
June 1, 2020 by daddy
ချစ်တယ်ဆိုတာထက်ပိုတဲ့မြတ်နိုးမှုနဲ့ကိုယ်တို့တွဲခဲ့ကြတာ။ အချိန်ကြာတော့ အေးစက်စက် ဆက်ဆံရေးက ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလား။ ချစ်ခြင်းဟာ ပူလောင်တတ်ပါရဲ့နှင့်အပူခံ ဆုပ်ကိုင်ထားမိတာဟာဆုံးရှုံးရမှာကို ကြောက်လို့ပေါ့။ ဆန်ကျင်ဘက် ခံစားချက်တွေဟာနှလုံးသားကို နာကျင်ရတာထက်ပိုပါတယ်။ ဘဝတခုလုံးကိုပါ ပျင်းရိချောက်သွေ့စေခဲ့တာ။ အားအင်တွေကုန်ခမ်းစေလိုက်တာ။ ဒဏ်ရာမဲ့ အနာတွေက သွေးစိမ်း‌တွေစီးကျစေခဲ့တာ။ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုစရမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းစကိုပါ ပျောက်ပျက်သွားနိုင်တာမျိုး။ ရိုက်နှက်တာထက် ပိုနာကျင်ရပါတယ်။ ဘာပြောပြော ၊ဘာဖြစ်ဖြစ်မျက်တောင်ကိုပုတ်ခတ် မေးကိုတချက်ကိုက် မျက်ရည်စကိုသိမ်းဆည်းရင်း ကိုယ်ဆက်ချစ်နေမိအုံးမှာ။ လက်မလွတ်နိုင်သေးဘူး။ဘာလို့လဲ..မင်းသိလား။ မင်းကို ချစ်နေရတာကိုက..ကျေနပ်နေရလို့။ မပို(ထီးလင်း) ခ်စ္တယ္ဆိုတာထက္ပိုတဲ့ျမတ္ႏိုးမႈနဲ႔ကိုယ္တို႔တြဲခဲ့ၾကတာ။ အခ်ိန္ၾကာေတာ့ ေအးစက္စက္ ဆက္ဆံေရးက ျဖစ္တတ္တဲ့သေဘာလား။ ခ်စ္ျခင္းဟာ ပူေလာင္တတ္ပါရဲ႕ႏွင့္အပူခံ ဆုပ္ကိုင္ထားမိတာဟာဆုံးရႈံးရမွာကို ေၾကာက္လို႔ေပါ့။ ဆန္က်င္ဘက္ ခံစားခ်က္ေတြဟာႏွလုံးသားကို နာက်င္ရတာထက္ပိုပါတယ္။ ဘဝတခုလုံးကိုပါ ပ်င္းရိေခ်ာက္ေသြ႕ေစခဲ့တာ။ အားအင္ေတြကုန္ခမ္းေစလိုက္တာ။ ဒဏ္ရာမဲ့ အနာေတြက ေသြးစိမ္း‌ေတြစီးက်ေစခဲ့တာ။ ဘယ္ကေန ဘယ္လိုစရမယ္ဆိုတဲ့ လမ္းစကိုပါ ေပ်ာက္ပ်က္သြားႏိုင္တာမ်ိဳး။ … Read more
Categories Tameelay Knowledge Tags 01, ma po
အမေသို့ ရင်ဖွင့်စာ အမေ… အခက်ခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ . ပြေးခိုလိုက်ချင်တာ မိဘရင်ခွင်ပါ…. ပူလောင်လွန်းတဲ့ ဒီလောက. မာယာများတဲ့ ဒီလောက. မျက်နှာဖုံးများစွာနဲ့ ဒီလောက.. စရိုက်မျိုးစုံ အဖုံဖုံကို ရင်ဆိုင်ကျော်ဖြတ်ဖို့ ခက်ခဲလွန်းလှတယ် အမေရယ်.. ပူလောင်လှတဲ့ လောကီထဲမှာ အပူရုပ်ကို ဟန်လုပ်ပြီး နေရတဲ့ အလုပ်ဟာလဲ သမီးအတွက် အရမ်းးပင်ပန်းတယ်အမေ… မာယာတွေနဲ့ အလှဆင်ထားတဲ့ ဒီလောကကြီးမှာ .. ကိုယ်က သားကောင်မဖြစ်ဖို့. ကြောက်လန့်မှုတွေဖုံးကွယ် ကြိုးစားအားမွေးရင်း ရပ်တည်နေရတယ်.. ဒါတင်မကသေးဘူးအမေ.. မျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ ပုံရိပ်စစ်ကိုမြင်နိုင်ဖို့. ထွင်းဖောက်ကြည့်နေရတယ်. ဖြစ်နိုင်ခွင့်သာရမယ်ဆိုရင်.. သမီးလေ.. ဟိုး…….. ငယ်ဘဝကစားခဲ့ရတဲ့ ဘာဟင်းမှ မပါ ကြောင်ဆီ ကျားဆီဆိုတဲ့ ထမင်းဖြူဆုပ်ကလေးကို စားရင်း.. ဖြူစင်တဲ့ ကလေးဘဝလေးနဲ့.. အမေ့ရင်ခွင်မှာ … Read more